आजको राशिफल - भदौ ०६ गते बुधबार (भिडियो सहित ) - Pokhara News
होमपेज/जीवनशैली/राशिफल/आजको राशिफल – भदौ ०६ गते बुधबार (भिडियो सहित )
आजको राशिफल – भदौ ०६ गते बुधबार (भिडियो सहित )
पोखरा न्यूज भाद्र ६, २०७५
पोखरा न्यूज – भदौ, ०६ ।
आज वि.सं. २०७५ भाद्र ०६ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अगस्ट २२ तारिख, श्रावण शुक्ल एकादशी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, धनु राशिको चन्द्रमा, प्रीति योग, विष्टि (भद्रा) र बब करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : पुत्रदा एकादशी व्रत, डोलेश्वर उत्सव,
भोलिको चाडपर्व र उत्सव : गुरु प्रदोष व्रत, बहिद्यवोय,
भोलिको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), शिलान्यास (सामान्य), डेरा सर्ने, कलशचक्र,
राहु काल : दिउँसो १२:०६ देखि ०१:४३ सम्म
यमघण्ट : बिहान ०७:१४ देखि ०८:५१ सम्म
गुलिक काल : बिहान १०:२९ देखि १२:०६ सम्म
काल वारवेला : बिहान ०८:५१ देखि १०:२९ सम्म
लाभ वारवेला : बिहान ०५:३७ देखि ०७:१४ सम्म र साँझ ०४:५७ देखि ०७:५७ सम्म
भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा ईशान (उत्तरपूर्व) र आग्नेय (दक्षिणपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने दही खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । मनमा डर र चिन्ताले निवास गर्नेछ । लेनदेनमा विवाद होला । व्यावसायिक काममा पनि केही समस्या आउन सक्छन् । स्वास्थ्यमा कमजोर रहला । बलजफ्तीले चिताएको काम बिग्रन सक्छ । पुरानो सम्झौता भङ्ग हुने सम्भावना छ । धैर्यसाथ बुद्धिको उपयोग गर्दा बिस्तारै काम बन्नेछ । त्यसैले आत्मबल बढाएर हिम्मतका साथमा काम गरेमा आम्दानी बढ्नेछ भने आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुनसक्छ । प्रेमको बन्धन कसिने बेला छ । तर रमाइलो यात्राको अवसर प्राप्त भए पनि सवारी साधन उपयोग गर्दा अलि सावधानी अपनाउनुहोला । साथीभाइबाट सहयोग मिल्नेछ ।
मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट खासै लाभ पाउन सकिंदैन । व्यापारमा समय दिन नसकेमा बेफाइदा हुनेछ । सामाजिक काम र परोपकारका मार्गमा अवरोध आउने छ । विशिष्ट व्यक्तिसँगको सम्बन्ध टाढिन सक्छ । आफ्नै व्यस्तताका कारण साथीभाइको सहयोग जुटाउन सकिंदैन । लामो समयदेखि काम बन्न नसकेकाले मनमा निराशा र वैराग्यका भावना टुसाउन सक्छन् । यद्यपि सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । परिश्रम र मिहिनेतका बलमा प्रशस्त लाभ उठाउन सकिने छ । प्रयत्न गर्दा महत्वपूर्ण वस्तु लाभ हुनसक्छ । अरूलाई प्रभावित पारेर दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ ।
स्रोत – कृष्णप्रसाद कोइराला, ज्योतिष साथी